Google Chrome မှာ Password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲ...? ~ မိုးညိုသား
Google Chrome မှာ Password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲ...?
2:32 PM Chrome ဆိုင်ရာ No comments
ကျနော် ရဲ့ ဘော်ဒါတွေ ထဲမှာ Google Chrome ကို သုံးစွဲကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေရှိမှာပါ
Loading ကြာချိန်လည်း နည်းတယ် Firefox ထက် မြန်ဆန် သွက်လက်တော့ သုံးစွဲကြမှာပါ
ကျနော် ကတော့ သုံးပါတယ်။ Google Chrome User တယောက်အနေနဲ့ LOG IN ဝင်ပြီးတော့
သုံးပါတယ်။ ဘာကောင်းလည်း ဆိုတော့ ဒီမှာ Sign up လုပ်ထားချင်းအားဖြင့်
မည်သည့် နေရာ မည်သည့် PC မှာ မဆို မိမိ သုံးစွဲနေကြ Bookmark တွေ Mail တွေကို
ပြန်လည်ရရှိပါတယ်။ ဒီထက်ပိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။windows အသစ် တင်လိုက်လို့
Google Chrome အသစ်ပြန်ဆွဲမယ် ဆိုပါစို့ မိမိ သုံးနေကျ အကောင့်နဲ့ password ကို ပေးပြီး
ပြန်ဝင် မယ် ဆိုရင် မိမိ အကောင့်နဲ့ ပါက်သက်သမျှတွေ ပြန်လည်ရရှိပါတယ်။
အိုကေ အခု့ ပြောချင်တာက Chrome ကို သုံးပြီး Gmail တွေ Facebook တွေ ဖွင့်ထားမယ်
password တွေကိုလည်း save ထားမယ် ဆိုပါစို့ ။ ဥပမာ Facebook ကိုဖွင့်မယ်
password တွေကို save ( Remember Passwordလုပ်) ထားတဲ့ အတွက်
facebook မှာ user name တွေ password တွေကို
ပြန်ရိုက်နေစရာ မလိုဘူး Facebook ကြီး တန်းပွင့် လာမယ် ။ဟုတ်တယ်နော်
အဲ့ဒီလို သုံးတာများလာလို့ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို အကြာင်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် passwoord တွေ
မေ့နေပြီ ဆိုရင် ဘယ်လို ပြန်ကြည့်လို့ရနိူင်တယ် ဆိုတာကို အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်
Google Chrome ရဲ့ Latest Version ကိုလိုချင်ရင် ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ပါ
လုပ်နည်းလေး ကိုတော့ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။လူတိုင်းတောင် သိနေမလား
မသိဘူး ခင်ဗျ။လုပ်နည်းလေးက လွယ်ပါတယ်။သတိမမူ ရင်သာ မမြင်ရပဲ နေမှာပါ
အပေါ်က ပုံအတိုင်း Google Chrome ရဲ့ ညာဘက်ဒေါင့် အပေါ်နားလေးက
ဘေးတိုက် မျဉ်း ၃ ကြောင်း ကို နှိပ်ပြီးတော့ setting ကိုသွားလိုက်ပါ
setting ထဲကို ရောက်ပီ ဆိုရင် Show Advanced setting ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ
Password and Forms ကိုရောက်ပြီ ဆိုရင် Manage Save Password ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ
အထဲမှာ မိမိ အသုံးပြု့ရန် save လုပ်ထားတဲ့ Password တွေကို မြင်ရပါအောင်
မိမိ လိုချင်တဲ့ password နေရာကို ကလစ်လိုက်ပါ ။ password နေရာမှာ Show လို့ ပေါ်လာပါပြီ
အဲ့ဒါ ဆိုရင် မိမိ password ကို ပြန်မြင်ရပါပြီ။ကြည့် ပြီးရင်တော့ Hide ကို ပြန် နှိပ်ထားလိုက်ပေါ့
မိမိ သုံးစွဲ သလောက် password တွေကို ဒီနေရာမှာ မြင်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
Password တွေကို save တယ် ဆိုတာလည်း Internet Cafe တို့ သူငယ်ချင်းတို့ ဆီမှာ
သွား မ save နဲ့ ..နားကားနေမှာစိုးလို့ပြောတာ .ခ်ခ်။
တခြားလူ နဲ့ မျှဝေ သုံးစွဲခြင်း မရှိတဲ့ မိမိ ကိုယ်ပိုင်စက်တွေမှာပဲ save လုပ်ထားသင့်ပါတယ်